६ वर्षको उमेरमा ‘सिक्स प्याक’ ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/६ वर्षको उमेरमा ‘सिक्स प्याक’ !
आजकल प्रायः मानिस आफुलाई फिट राख्न अनेकन उपाय अपनाइ रहेका हुन्छन् । विशेषत युवा वर्ग फिटनेश प्रति बढि आर्कषित छ । वृद्ध उमेरका मानिस पनि अवस्था अनुसार रोग नलागोस् भनेर बिहानबेलुका हल्का शारीरिक ब्यायाम गर्दछन् । तर साना नानीहरुमा भने फिटनेशको कुनै चाह हुदैन ।
अभिभावक समेत आफ्ना बच्चाहरु हृष्टपुष्ट हुन् भन्ने तर्फ नै हुन्छन् । तर ईरानका एक ६ बर्षका बालकमा भने फिटनेसको भुत यतिसम्म चढेको छ कि केवल ६ बर्षको उमेरमा उनले सिक्स प्याक बनाएका छन् । ६ बर्षकै उमेरमा सिक्स प्याक बनाएका यी बालकको चर्चा विश्वभर छ । इरानका यी बालकको नाम हो, आरत होसैनी ।ईरानको बाबोल शहरका निवासी आरत सामाजिक सञ्जालमा स्टार बनेका छन् । उनको चर्चा कति छ भन्ने कुरा उनको सामाजिक सञ्जालका फ्यानको संख्याबाट पत्ता लाउन सकिन्छ । इन्स्टाग्राममा उनको ४२ लाख भन्दा बढि फलोअर्स छन् । यति मात्र होइन उनको एक पोष्टमा लाखौ लाइक आउने गर्दछ ।
आरतको जन्म इग्लैण्डमा सन् २०१३ सेटेक्बर ३० मा भएको थियो । उनी लिभरपुल एकेडमीमा स्पोर्ट्स ट्रेनिग लिइरहेका छन् । ९ महिनाको उमेरमा नै जिमनास्टिक थालेका आरतले दुई बर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा नै अन्र्तराष्ट्रिय चर्चा कमाइसकेका थिए । आरतको चर्चा र उपलब्धिको श्रेय उनका पिता मोहम्मदलाई जान्छ । यी बालकमा सिक्स प्याक एब्सका अलावा फुटबल खेलप्रति आर्कषण छ । उनी ठुलो भएर बार्सिलोना साकर क्लबका लागी खेल्न चाहन्छन् । उनको मनपर्ने फुटबल खेलाडी लियोनल मेस्सी हुन् ।
आफू जन्मेको बार र राशिअनुसार यसरी लगाउनुहोस् रत्न, कुन राशिलाई कुन रत्न शुभ ?